DEG-DEG: Mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan ee Real Madrid oo laga helay Korona Fayras – Gool FM
(Madrid) 06 Abril 2021. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa heshay war aan wanaagsaneyn ka hor kulanka caawa Liverpool ay la ciyaari doonaan lugta koowaad ee wareegga siddeed-dhammaadka tartanka Champions League.
Difaaca Los Blancos ee Raphael Varane ayaa laga helay xanuunka Korona Fayras, waxaana kooxda reer Spain ay xaqiijisay in xiddigan uu la xanuunsanaayo fayraska aafeeyay dunida.
Si kastaba ha ahaatee, xiddiga reer France ayaa seegi doona ciyaarta caawa ee ay kooxdiisa la balansan tahay naadiga Reds, si la mid ah kulanka Sabtida ee ay Real Madrid wajaheyso Barcelona ee ka tirsan horyaalka La Liga.
Maqnaashaha Sergio Ramos iyo Varane awgeed, Macallin Zinedine Zidane ayaa difaaciisa dhexe u adeegsan doono wada-jirka Nacho iyo Eder Militao.
Kooxda PSG oo shaacisay liiska xiddigaha uga qeyb galaya kulanka habeen dambe ee Bayern Munich... (Miyey ku jiraan Neymar iyo Mbappe?)